Mamnuuca KHUDBADDA Barnaamijka Bilaashka ah | Laga soo bilaabo Linux
Mamnuuca KHUDBADDA Software-ka Bilaashka ah
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | La cusboonaysiiyay 04/02/2015 14:57 | Isticmaal FileLet, Lagu taliyay
Iyadoo lala kaashanayo Xarunta Bilaashka ah ee Casriga ah ee Castilla-La Mancha, waxaan kuu soo bandhigeynaa maqaalkan xiisaha leh, kaasoo jabinaya qaar ka mid ah khuraafaad inta badan ku xeeran software bilaash ahTani waxay, waxaan rajeynayaa, inay noqon doonto tii ugu horreysay ee taxane maqaalo ah oo ay soo saartay hay'ad sharaf leh, oo u dooratay booskan hoose faafin qaar ka mid ah qodobbada.
Software-ka Bilaashka ahi waa kacaan farsamo oo bedelay habka loo fahmo xorriyadaha isticmaalaha, deegaanka sharciga ah, hababka horumarka iyo qaabka dhaqaale.
Ka faa'iideysiga adeegyada ku saleysan Software-ka Bilaashka ah waxay bixisaa qaab dhaqaale oo faa'iido badan leh, gaar ahaan SMEs iyo bixiyeyaasha micro-SMEs ee xalalka ICT, maaddaama ay u oggolaaneyso helitaanka aqoonta lagama maarmaanka u ah ka faa'iideysiga xalal badan oo xirfadlayaal ah iyada oo aan loo baahnayn in la bixiyo rukhsadaha isticmaalaha. Si kastaba ha noqotee, fursadaha qaabkani si buuxda ugama faa'iideysan waaxda.
Waxaa jira khuraafaad badan oo ku saabsan Software-ka Bilaashka ah ee joojiya ku shaqeynta shirkadaha bixiya tikniyoolajiyadda iyo natiijada shirkadaha macaamiisha. Khuraafaadyadan, oo si isa soo taraysa looga adkaaday, waxay u muuqdaan inay ku faafaan jahli darrada iyo diidmada ay dadku u qabaan inay aqbalaan isbeddelada.
1 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi ma ahan qaab ganacsi oo faa'iido leh
2 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi maahan mid tayo leh
3 KHUDBAD: Barnaamijka bilaashka ah malaha xalal ganacsi
4 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah ayaa aad u adag in la isticmaalo
5 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah lama jaanqaadi karo qalabka dhismaha
6 KHUDBAD: Barnaamijka bilaashka ah waxaa lagu isticmaali karaa oo keliya nidaamka GNU / Linux
7 Khuraafaad: Software-ka bilaashka ah ayaa soo afjari doona xirfadda barnaamij-yaqaan
8 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi ma laha taageero farsamo maxaa yeelay waa lacag la’aan
9 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah uma adeegsado qaabab la jaangooyey
10 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi malaha aalado horumarineed oo hufan
11 KHUDBAD: Software bilaash ah ma laha dammaanad
12 KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi waa amni darro badan
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi ma ahan qaab ganacsi oo faa'iido leh
Tani waa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah khuraafaadka ugu soo noqnoqda shirkadaha softiweer dhaqameedka soo jireenka ah ee ka yimaada xaqiiqda illaa iyo aan sanado badan ka hor ganacsiga shirkadaha ICT ay ku jireen iibinta rukhsadaha iyo qalabka.
Tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa cadaatay in ganacsiga dhabta ah uu ku jiro iibinta adeegyo qiimo leh iyo in kaliya shirkadaha waaweyn ee leh xaalad keli-keli ah ay ku salayn karaan qaabkooda uruurinta liisamada.
Barnaamijka Bilaashka ah wuxuu siiyaa fursad shirkadaha yar yar ee ICT-da inay kula tartamaan kuwa waaweyn, maadaama ay sahleyso helitaanka tiro badan oo ilo iyo codsiyo diyaar u ah in looga faa'iideysto ganacsi ahaan.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi maahan mid tayo leh
Mid ka mid ah kumanaanka tusaale ee mugdi gelinaya fikraddan waa Google oo adeegsata oo horumarisa dhammaan noocyada Software-ka Bilaashka ah. Laakiin waxaa jira shirkado badan oo waaweyn oo iyaguna ku tiirsan tayada Software-ka Bilaashka ah, sida IBM, HP, Oracle, Microsoft, NASA, Airbus iyo aad u dheer iwm.
KHUDBAD: Barnaamijka bilaashka ah malaha xalal ganacsi
Tirada codsiyada ka jira adduunka ee Barnaamijka Bilaashka ah waxay la mid yihiin kuwa barnaamijyada lahaanshaha.
Waxaa jira alaabooyin tayo sare leh oo bilaash ah oo ku dhowaad suuq kasta: ERPs, CRMs, CMS, DMS, Maareynta Mashruuca, Servers, Macluumaadka, Naqshadeynta, iwm.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah ayaa aad u adag in la isticmaalo
Khuraafaadkani wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in taariikh ahaan GNU / Linux ay ahayd nidaam kaliya ku habboon khabiiro takhasus u leh aqoonta kombiyuutarka qoto dheer, laakiin tobankii sano ee la soo dhaafay tani si weyn ayey isu beddeshay, tusaalaha waxaa laga helaa wax kasta oo hadda jira oo loo qaybiyo GNU / Linux, kaas oo rakibiddiisa iyo maarayntiisu tahay runtii fudud.
Haddii dalabku fududahay ama ay adag tahay in la maareeyo waxba kuma laha haddii uu yahay Software Bilaash ah iyo in kale, laakiin halkii ay ka noqon lahayd kakanaanta murugsan ee dhibaatada ay wax ka qabato oo ay u dhigantaa tababarka ay hesho.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah lama jaanqaadi karo qalabka dhismaha
Waqtigan xaadirka ah, nidaamyada hawlgalka GNU / Linux waxay si sax ah ula shaqeeyaan inta badan qalabka kombuyuutarka ee suuqa, iyadoon loo baahnayn in gacanta lagu rakibo darawal kasta.
Marka qalab uusan jaan qaadi karin (iyadoon loo eegin nidaamka lagu shaqeynayo ee la isticmaalay), waxaa lagama maarmaan ah in la aado websaydhka soo saaraha oo loo helo darawalka qalabkaas nidaamkaas Haddii aanad helin, Barnaamijka Bilaashka ah waxaad sidoo kale u jeedsan kartaa Bulshada si ay u xalliso.
KHUDBAD: Barnaamijka bilaashka ah waxaa lagu isticmaali karaa oo keliya nidaamka GNU / Linux
Hadalkani waa mid gebi ahaanba khaldan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee Software-ka Bilaashka ahi waa in ay tahay mid isku dhafan. Waxaa jira dhammaan noocyada codsiyada bilaashka ah ee loo isticmaali karo nidaamyada hawlgalka waaweyn. Tusaalaha ugu fiican ayaa ah biraawsarka Mozilla Firefox ama xafiiska OpenOffice.org, laakiin sidoo kale inta badan codsiyada ganacsiga
sida ERP, CRM, CMS, Servers, iwm.
Khuraafaad: Software-ka bilaashka ah ayaa soo afjari doona xirfadda barnaamij-yaqaan
Kani waa khuraafaad kale oo badanaa loo adeegsado in lagu weeraro Software-ka Bilaashka ah wax run ahna kama jiraan.
Barnaamijka bilaashka ah wuxuu hagaajiyaa barnaamijyada, maadaama uu albaabka u furayo aqoonta, iyaga oo u oggolaanaya inay galaan koodhka ilaha, dukumiintiyada farsamada, soosaarayaasha wax soo saarka, iwm.
Nooca caadiga ah ee barnaamijka softiweeriga ah ee bilaashka ah waxaa qadarinaya shirkadaha waaweyn ee qiimeeya xiisaha ay u qabaan aqoonta, khibrada shaqada iskaashiga ah ama adeegsiga aaladaha maareynta mashruuca.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi ma laha taageero farsamo maxaa yeelay waa lacag la’aan
Guud ahaan waxaad ku heli kartaa Software Bilaash ah bilaash, tani waa cawaaqibka koodhku inuu bilaash yahay. Laakiin dhammaan aaladaha waa la taageeraa, oo ay bixiyaan horumariyeyaasha naftooda (waa wax aan u badnayn barnaamijka bilaashka ah), ama shirkadaha bixiya adeegyo khaas ah.
Taageeradu badanaa waa mid tayo sare leh, maxaa yeelay shirkadaha bixiya waxay marin u helaan dhammaan agabyada software-ka.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ah uma adeegsado qaabab la jaangooyey
Software-ka Bilaashka ahi waa mid ka mid ah difaacayaasha ugu waaweyn ee adeegsiga heerarka furan, halka ay tahay shirkadaha waaweyn ee softiweerrada ah ee bilaashka ah ee dhiirrigeliya hirgelinta qaabab xidhan oo ah heerarka "de facto" si ay u helaan booska keli ahaanta ee suuqa.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi malaha aalado horumarineed oo hufan
Barnaamijka Bilaashka ah waxaad ka heli doontaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah horumarinta iyo maaraynta mashaariicda barnaamijyada.
-Degmooyinka horumarka sida Eclipse, NetBeans, MonoDevelop, Glade + Anjuta, Kdevelop ...
Qaab dhismeedka iyo maktabadaha ficil ahaan luuqad kasta sida Java, Python, Ruby, C / C ++, Perl, Mono, Php ...
- Iyo qalab aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay maareynta mashruuca iskaashiga, xakamaynta koodhka, dhacdooyinka ...
KHUDBAD: Software bilaash ah ma laha dammaanad
Software-ka bilaashka ahi kuma bixiyo dammaanad qaadis hawl-socodsiinteeda, waa shirkadaha qaybiya oo fuliya ayaa bixiya dammaanad-qaadkan.
Guud ahaan, oo leh softiweer lahaansho, waxaa dhacda in xitaa bixinta liisanka isticmaalaha, aan dammaanad qaad laga helin hawlgalka.
KHUDBAD: Software-ka bilaashka ahi waa amni darro badan
Khuraafaadkani wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in qof kastaa heli karo koodhka ilaha oo uu raadin karo nuglaanta. Si kastaba ha noqotee, tani waa hantideeda weyn, tan iyo markii ay u oggolaaneyso dib-u-eegista adeegsadayaasha iyo khabiiro takhasus leh oo ogaan kara khaladaadka isla markaana si dhakhso leh u saxa, xitaa ka hor intaanay dhibaato noqon.
Qoraalkan waxaa diyaariyey CESLCAM, oo ah Xarun ku tiirsan Gudiga Beesha ee Castilla-La Mancha, oo shaqadeedu tahay inay u shaqeyso sidii ay u noqon laheyd kalifeeye iyo faafiyaha Software-ka Bilaashka ah iyo ICT-da ee gobolka, iyagoo siinaya macluumaad iyo talooyin maamullada, shirkadaha iyo isticmaalayaasha dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Mamnuuca KHUDBADDA Software-ka Bilaashka ah
Anigu waxaan ahay difaacaha adag ee softiweerka bilaashka ah, inkasta oo aan diidmo yar qabo. Xaalado aad u tiro badan, taageerada farsamo waxay ka tagtaa waxyaabo badan oo la jeclaan karo, xirfadlayaashu diyaar uma ahan sidii la rabay inaan si sax ah u noqono maxaa yeelay sida wax walba ay u jiraan (internetka) iyo marka riixitaanka la yimaado, waxaan heysanaa diyaar garow, waxbaa hagaagsan laakiin daahay.
Jon booti dijo
Ma aadan dhigin tusaalaha ugu fiican. http://es.wikipedia.org/wiki/HPLIP
Jawaab Jon Boti
Maqaal aad u fiican oo leh waxa adeegsadayaashu iska indhatiraan Software-ka Bilaashka ah
Ku jawaab chepecarlos
Karlisle Aavli dijo
Maqaal aad u wanaagsan, runtii waan ka helay waxyaabaha soo socda.
Ku jawaab Karlisle Aavlí
Nick qulqulaya dijo
Weyn, maqaal runtii xiiso badan…. Aynu taageerno Barnaamijka Bilaashka ah !!!
Jawaab Nick Flows
Waxay ila tahay aniga wanaag inaannaan isku si u fekerin. Waa siyaabo lagu arko maadada ...
Waxay ila tahay aniga in la ogaado cidda "khaladka leh" inay muhiim tahay. Inaan laga takhalusin dhibaatada. Mana aha in "sharaxaad laga bixiyo" isticmaaleyaasha (taas oo asal ahaan aan waxba xallinayn). Inbadan oo ka mid ah hab loo eego dhinaca kale oo aan la qirin in Linux dhibaato ka haysato ogaanshaha aaladaha qaar (sida Windows oo kale). Maya, midkoodna sababahaas aad kor uqaaday. Waxay ila tahay inay haboontahay in la ogaado meesha dhibaatadu ka jirto si loo ogaado sida loo saxo. Halkaasna, kuwa kaliya ee runti gacan ka geysan kara si loo hagaajiyo taageerada qalabka ee Linux, ayaa ah kuwa horumariya qalabka. Iyaga ayay tahay inaan ku cadaadino inaan sii dayno qalabkooda. Tani waxay kicin doontaa tartanka oo, sida haddii taasi aysan ku filnayn, waxay sidoo kale hagaajin doontaa darawallada aaladahaas Windows-ka.
Sida laga soo xigtay darawalada kaararka fiidiyowga, Inta soo hartay, wax dhibaato ah kuma qabin qalab kale oo kumbuyuutarkeyga ah iyo nooc ahaan, qaybinta ayaa soo fiicnaanaya. Ugu yaraan kuwa aan aqaan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, la tasho golayaasha ama casharrada, waxaad arki doontaa sida noloshaada Gnu / Linux ay wax badan u hagaajiso dadkuna (salaanta dhammaantood) ay had iyo jeer diyaar u yihiin inay caawiyaan oo ay iskaashadaan.
Ku jawaab Hyogaasegard
aad iyo aad ayaan ugu hanbalyeynayaa dadaalka aan ku hayo xogtan waxaanan sii wadi karaa u haajirida dadka isticmaala Software-ka Bilaashka ah ee wadankayga…
Ku jawaab biyaanoiste
Aad u wanaagsan, sidoo kale qaar ka mid ah sababaha aad banaanka u soo dhigeyso ayaa ah sababaha caadiga ah ee uu xiri karo Anti Linux Linux ee Hasefroch uu bixin doono isla markaana aysan cagaha iyo madaxa midna
Waa hagaag, laakiin waxyaabaha qaarkood waa inay noqdaan kuwo u qalma. Tusaale ahaan, Ubuntu waxaan ku qabay dhibaatooyin badan si aan ugu maamulo anteeno Wi-Fi ah USB-ga oo Windows-ku ku yaallo warshad. Wadayaasha kaararka fiidiyowga waa shit (waxay igu dhacday aniga iyo GeForce iyo Radeon labadaba in xawaaraha qalabka uu ka tago waxyaabo badan oo la doonayo). Ku shaqeynta daabacaha shabakad wey adag tahay laftigeeda iyo (ugu yaraan iyadoo la adeegsanayo HP MFP) taageeradu waa heer hoose xitaa marka si toos ah loogu xiro.
Ma dhahayo dhibaatooyinkaasi wax xal ah maheystaan, laakiin hadii ay jiraan, way ka dhib badan yihiin marka loo eego ... nidaamyada kale ee hawlgalka halkaasoo qalabkani uu si fiican uga shaqeynayo warshadda isla markaana aan lagu mashquulin.
Waxaan aqriyay dhowr ka mid ah 'tusmooyinka' anoo u daneynaya softiweerka bilaashka ah waxayna ila tahay inay la ildaran yihiin xoogaa indho la'aan markay tahay garashada dhibaatooyinka ay leedahay.
Khuraafaadkii i siiyay jaahilnimadayda, waqtigaas, qaar waan rumaysnaa laakiin, wax walba way is beddeleen oo aad bay u fiicnaadeen, markii aan go'aansaday inaan isku dayo nidaamkaas qalliinka ee la yiraahdo Kubuntu.
Maqaal aad u fiican.
Miyeey kaa saartay dhibaatada sidoo kale? Mise kansar baa ku daaweeyey?
Taasi ma ubuntokan ayaa had iyo jeer wax walba geeya ...
Cm Shaybaarada dijo
Maqaal wanaagsan oo lagu baabi'inayo khuraafaadka ku saabsan barnaamijka bilaashka ah.
Jawaab Shaybaarka Cm
Nabade Daneel! Waxaan u arkaa faalladaada mid xiiso leh. Waxaan ku raacsanahay in arrimahan ay aad u fududahay in lagu dhaco xagjirnimo hal jago ama mid kale. Waxaan aaminsanahay in softiweerku uusan dhib la'aan la'aan. Taageerada qalabka ayaa ka mid noqon kara? Hagaag, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay mid laga doodi karo.
Si la mid ah sidaad ula wadaagi lahayd khibradaada "guusha" Windows, waxaa jira kumanaan dad ah oo dhibaato ku qabay Windows markay ka shaqeynayaan mid ama qalab kale inuu shaqeeyo. Sidoo kale, inta badan, waxyaabaha ka shaqeeya Windows waa inaad ku rakibtaa darawallada saxda ah "gacanta". Waxaan ula jeedaa, waxyaabo dhif ah inay ka shaqeeyaan "sanduuqa" Windows-ka. Ka soo horjeedka ayaa ka dhacaya Linux. Xeerka suulka ayaa ah inaadan u baahnayn inaad rakibto darawal kasta oo aaladaha ay ku shaqeeyaan; marka laga reebo, isagoo leh.
Ugu dambayntii, waxaan kaaga tagay su'aasha soo socota inaad ka fikirto: haddii darawalada qalabkaas aan kuu shaqeynaynin ay leeyihiin lahaansho ama ay xiran yihiin (taas oo ah, qofna ma haysto marin koodhkiisa) iyo haddii shirkadaha soo saara qalabkaas aysan sii dayn wadayaasha sidoo kale u gaar ah Linux (sida ay u sameeyaan Windows ama Mac), yaa eedda leh? Linux? Mise shirkadaha wax soo saara? Dhibaatadan, waxaan kugula talinayaa inaad aqriso maqaal hore: http://usemoslinux.blogspot.com.br/2011/05/re-cuando-la-palabra-libre-en-software.html
Sidoo kale, waxaan u maleynayaa inaad xiiseyneyso maqaalkan kale ee ku saabsan qalabka
Ujeedkeygu maahan inaan sameeyo dagaal sheeko xariir ah, laakiin waxaan ka shakisanahay in dhanka darawalada, Ubuntu (inuu ka hadlo qeybinta Linux gaar ah) uu garaaco Windows. Sida tusaale ahaan ay tahay arrinta darawallada fiidiyowga oo adduunka oo dhan loo aqoonsan yahay inay maqan yihiin) iyo xaqiiqda ah inaad adigu lafteedu qiraneyso jiritaanka dhibaatadan mid ka mid ah qoraalada aad xiriirinayso.
Laakiin ka sii muhiimsan, waxaan u maleynayaa in barta eeddu ay tahay xeelad kale oo caadi ah laakiin gebi ahaanba aan khusayn (herring cas. Isticmaalaha ayaan dan ka lahayn haddii lagu "eedeeyo" inuusan awoodin inuu ciyaaro Mass Effect 3 (markale, tusaale ahaan ) Ubuntu waxaa iska leh Ubuntu maxaa yeelay way furan tahay, Biyowareerka maxaa yeelay uma kobco Ubuntu, Nvidia maxaa yeelay waxay leedahay darawal aan caadi ahayn ama "X" maxaa yeelay ma soo saarto hab wanaagsan oo lagu ciyaaro Ubuntu. Dan kama laha haddii ay "dambi leedahay" Inaadan si buuxda uga faa'iideysan karin daabacaddaada waxay ka timid Ubuntu maxaa yeelay way furan tahay ama waxay ka timid HP maxaa yeelay ma lahan darawallo Ubuntu wanaagsan. Ka hadalka "dambiga" si meesha looga saaro dhibaatada ma xallinayso. Sidoo kale waa wax aan qofna ku qancin doonin muhiimad siiya ka faa'iideysiga arrimaha "xorriyadda" fikradeed iyo, kaaga sii darane, waa marin habaabin maaddaama aad si wax ku ool ah u diideyso cabasho sax ah.
2012/3/27 Disqus <>
Waan ku raacsanahay, laakiin waxay ku xiran tahay horumariyeyaasha. Isaga oo leh waa "quraafaad" in Ubuntu ay dhibaato ka haysato dhanka qalabka waxay ila tahay inaan marin habaabinayo.
2012/3/28 Disqus <>
ma ahane dijo
Xaqiiqdii, qofna kuma tuurayo wasakh nafsadiisa. Raadi qoraal rasmi ah oo Windows ah oo sharraxaya waxyaabaha xun ee nidaamka ku saabsan.
Waa waxa Software-ka Bilaashka ahi leeyahay, in ka badan tiknoolajiyaddu inay tahay dhaqdhaqaaq fikradeed, oo sida fikradaha oo dhan ay leedahay cillado iyo aad u qaro weyn.
"Ka joojinta KHARIIRADA Barnaamijka Bilaashka ah" ... wax kasta oo kale:
Qaybta «Kiisaska yar ee ay tahay inaad la joogto Windows (hadda)»
Unsettings: waa qalab cusub oo lagu hagaajiyo Midnimada